व्हिस्कीको आसवन-उद्योग समाचार-गोआलोङ रक्सी (समूह)
व्हिस्की को आसवन
केही पानी थप्नु राम्रो पिउने अनुभव हो। तर व्हिस्की डिस्टिल गर्दा, रक्सी मात्र छोडेर, पानी पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्छ। यो आसवन को उद्देश्य हो। विभिन्न आसवन विधिहरू प्रयोग गर्दा पनि फरक परिणामहरू प्राप्त हुनेछन्। आसवन विधिहरूमा परम्परागत एकल आसवन, निरन्तर आसवन र भ्याकुम आसवन समावेश छ।
आसवन को सिद्धान्त के हो?
आसवनले कुनै पनि पदार्थमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन, तर उम्लने बिन्दु अनुसार विभिन्न पदार्थहरू अलग गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, पानीको उम्लने बिन्दु 100 हो°C, तर रक्सी लगभग 80 मा वाष्पीकरण हुनेछ°C. तसर्थ, जब हामीले किण्वन गरिएको मुसालाई तताउँछौं, तरलमा रहेका विभिन्न पदार्थहरू एक एक गरेर वाष्पीकरण हुनेछन्। तापक्रम नियन्त्रण गरेर, ग्यासिफाइड अल्कोहललाई तरल बन्न दिनुहोस्। यो प्रक्रिया आसवन छ।
पदार्थको अवस्था (ठोस, तरल र ग्यास) को परिवर्तनहरू प्रयोग गरेर, पहिले तताउने र त्यसपछि चिसो गर्ने थर्मोडाइनामिक्सबाट आसवनको सिद्धान्त आउँछ। डिस्टिल्ड सामग्रीहरू उमालेर तताइन्छ, र भाप तुरुन्तै उठ्छ, त्यसपछि ट्यूबको माध्यमबाट कन्डेनसरमा प्रवेश गर्दछ, अन्तमा चिसो भएपछि तरल अवस्थामा फर्कन्छ।
व्हिस्की डिस्टिल गर्ने मुख्य बिन्दु सही उम्लने बिन्दु फेला पार्नु हो। उम्लने बिन्दु 80 भन्दा अलि बढी हुनुपर्छ°C आवश्यक रासायनिक अणुहरू डिस्टिल गर्न र व्हिस्कीमा सुगन्ध दिन। धेरैजसो एकल माल्ट व्हिस्की डिस्टिलरहरूले एकल डिस्टिलेसन प्रयोग गर्छन्, एक जोडी डिस्टिलरहरू प्रयोग गरेर दुई पटक किण्वित गरिएको चट्टान डिस्टिल गर्न। पहिलो आसवन पछि, हामी पहिलो डिस्टिल्ड रक्सी प्राप्त गर्न सक्छौं। डिस्टिल्ड रक्सीमा 20% -25% को अल्कोहल एकाग्रता हुन्छ, पहिलो डिस्टिल्ड रक्सी फेरि डिस्टिल्ड हुन्छ। कुन प्रक्रियालाई "डबल डिस्टिलिंग" भनिन्छ।
केही डिस्टिलरहरूमा, यदि डिस्टिलरहरू डिस्टिलरमा बस्न धेरै व्यस्त छन् भने, तिनीहरूले पहिलो डिस्टिलेसन गर्दा डिस्टिलरहरूमा असुगन्धित साबुनको सानो टुक्रा थप्नेछन्। जसले धेरै फोमलाई उमाल्नबाट रोक्न र दुर्घटनाको सम्भावना कम गर्न सक्छ। साबुन तरलको उम्लने बिन्दु रक्सीको भन्दा उच्च हुन्छ, त्यसैले चिन्ता नगर्नुहोस् कि साबुन तरल व्हिस्की रक्सीमा आउनेछ।
अघिल्लो: व्हिस्की डिस्टिलेसनको समयमा डिस्टिल्ड रक्सी सङ्कलन गर्ने तीन चरणहरू
अर्को: Goalong समूह को लागी सिने माल्ट व्हिस्की को अवसर र चुनौतीहरु